Kutheni uPedro Regis? -Ukubalwa ukuya eBukumkanini
Ngemiyalezo engama-4921 ekuthiwa yafunyanwa nguPedro Regis ukusukela ngo-1987, umzimba wezinto ezinxulumene nokuhlanjwa okungcolileyo kweLady Yethu yaseAnguera eBrazil kubaluleke kakhulu. Imtsalane ingqalelo yababhali abaziingcali ezifana nentatheli eyaziwayo yase-Italiyane uSaverio Gaeta, kwaye kutsha nje sele ingumxholo wophononongo lobude beencwadi ngumphandi uAnnita Magri. Ukuqala nje, imiyalezo inokubonakala iphindaphinda ukubaluleka komthandazo, iZibhalo kunye ne-Ekaristi. Nangona kunjalo, xa kuthathelwa ingqalelo ixesha elide, imiyalezo yeAnguera ichukumisa imiba eyahlukeneyo yezihloko engenanto engangqinelaniyo neemfundiso zeCawe okanye izityhilelo eziyimfihlo.
Kuyacaca ukuba umxholo wale miyalezo awunakuba nemvelaphi yedemon ngenxa ye-theologoxy engqongqo yabo. Kuyinyani ukuba onamandla waseCanada uDominican François-Marie Dermine utyhola uPedro Regis kumajelo eendaba e-Itali yamaRoma ngokuthi afumane imiyalezo "ngokubhala." Imboni, yona ngokwayo, iyikhalimele le ntetho ngqo nangokuzithemba (Cofa apha). Ukujonga ukwabelana noPedro ngemiyalezo ayifumeneyo, Cofa apha.
Xa kuhlolisiswa izimvo zikaFr. Ulusu malunga nombuzo oqhelekileyo wesityhilelo sangasese sangoku, kuyakhawuleza ukubonakala ukuba unezakwalizwi kuqala Nxamnye nasiphi na isiprofetho (njengombhalo kaFr. Stefano Gobbi) kwaye sijonga ukuza kwe-Era yoxolo umbono olambisa. Ngokunokwenzeka kokuba uPedro Regis ebenokuyila phantse imiyalezo engama-5000 kwisithuba seminyaka ephantse ibe ngama-33, kuya kufuneka ebuzwe ukuba yeyiphi na inkuthazo anokuba nayo ngokwenza oko. Ngokukodwa, wayenokuthini uPedro Regis ukuba acinge umyalezo obanzi # 458, awawufumana esidlangalaleni ngelixa eguqe ngamadolo kangangeyure ezimbini ngoNovemba 2, 1991? Kwaye angayibhala njani phantsi kwamaphepha angama-130 amaphepha abhalwe kwangaphambili, umyalezo umi ngokugqibeleleyo kwiphepha le-130? U-Pedro Regis, ngokwakhe, wayengazi nentsingiselo yezinye zegama le-theology elisetyenziswe kumyalezo. Kuthelekelelwa ukuba kumalunga nama-8000 amangqina akhoyo, kubandakanya iintatheli zeTV, kuba uLwethu uMfazi wase-Anguera wayethembise umhla ongaphambili ukunika "umqondiso" kubagxeki.
Imiyalezo evela kuPedro Regis
UPedro-IBandla likaYesu wam liyaphumelela
Amajoni akhaliphileyo aya kwenza . . .
Pedro – Izitshixo ziya kugqithiswa ukusuka kwiSandla ukuya kwiSandla
Phambili ngaphandle koloyiko!
Pedro – Thembeka kuYesu
Ngaphandle koMthendeleko akukho Cawa . . .
UPedro-Yibani ngamadoda kunye nabafazi bomthandazo
Baninzi abanenkalipho kaYudas.
UPedro - Abaninzi baya kuba ngabafeli-nkolo
UYesu wam udinga ubungqina bakho basesidlangalaleni kunye nenkalipho.
UPedro – Ubumfama boMoya obuKhulu buya Kunwenwa
Funa inceba kaYesu wam ngesakramente yesivumo...
Pedro – Isipili siMfiliba
Funa amandla kwi-Ekaristi...
Pedro – Yiba Phakathi Kwabantu
UPedro –Zabalazela ukuthembeka
Yiba njengoYesu kuyo yonke into.
Pedro – Uphila iDabi elikhulu
Isaqhwithi esikhulu siyakubetha iBandla likaYesu wam.
UPedro – Ibhere Elinoburhalarhume
Iya kufikelela eRoma, kwaye apho, ishiye uphawu lwayo...
Pedro – Ukudelela iNyaniso
Abalusi ababi baya kubangela ubumfama obukhulu kunye neentlungu zokomoya.
UPedro-Isiphithiphithi kwiNdlu kaThixo
IBhabheli iya kunwenwa kuyo yonke indawo... Ukuba izandla azithanjiswanga, akukho Bukho bukaYesu.
UPedro – Abantwana Bam Abangamahlwempu Bazakulamba
UPedro – Musa ukumka eCaweni
Abalusi abakhohlakeleyo baya kubamba into ebisoloko ibubumnyama.
UPedro – Ukuthula Kuyazomeleza Iintshaba zikaThixo
Yenza okusemandleni akho ukuyimela inyaniso.
Pedro – Akukho Luxolo ngaphandle kukaYesu
Uphila kumaxesha osizi ... ubuzwilakhe obubi benkolo buza kusasazeka kuyo yonke indawo.
UPedro – Amajoni angamakroti eCassocks
... liya kulwela elinye, iBandla eliyinyaniso.
Pedro – Thanda kwaye Ukhusele iNyaniso
Abo bahlwayela inyaniso engaphelelanga abayi kungena kwingcwele engunaphakade.
...xa ndithi kuwe mthande uYesu ngentliziyo yakho yonke.
UPedro – Inzonzobila eyenziwe ngumntu
Yiba ngumqondiso woBukho bukaKristu.
UPedro – INkosi Iza Kuhlangula Abakhe
Kuya kubakho imfazwe enkulu.
Pedro – Musa ukuyilahla Inkululeko
Kuya kubakho abafeli-nkolo abaninzi.
Pedro – Uya Kusiwa Phambi kweeNkundla
...kodwa musa ukuhlehla.
UPedro – Imithetho yobuThixo iya Kulahlwa
Ikamva liya kuba lilungele amalungisa.
UPedro - UThixo kuqala
Musa ukuhlala kude nomthandazo.
UPedro-Umtyholi uzakwenza ngomsindo
...nxamnye nabantwana beNkosikazi Yethu. Musani ukoyika!
UPedro-uYesu ufuna ingqina lakho elinesibindi
Ungasuki kwiimfundiso zeBandla laKhe.
UPedro – Uthotyiwe kwaye udeliwe
...kodwa akazange ahlehle.
UPedro - Kwabo bazinikele kum
... ukukhanya akusoze kwacima.
Isondele imini yeNkosi.
Umsi kaMtyholi uya kubangela ubumfama bokomoya phakathi kwabalungiseleli abaninzi bakaThixo.
Pedro - Uphila kwixesha elibi ngaphezu koMkhukula
Pedro-Umhlobo wakho Omkhulu
Pedro - Intshutshiso Enkulu
Bambalwa abaya kuhlala beqinile elukholweni.
UPedro-Idabi eliKhulu lokomoya
I-Pedro-Isiqhwithi esikhulu sokomoya
Umkhumbi oMkhulu uza kubethwa.
Inqanawa enkulu yokholo yaphuka.
Pedro - Musa ukudimazeka
UYesu wam usecaleni kwakho.
UPedro-Ubuntu kwiNdlela yokuZitshabalalisa
Eli lixesha leentlungu.
UPedro-Amadoda oNgcolongo aya kuThatha
Mamela kuYesu, wamkele iVangeli yakhe.
Pedro - Inkululeko
Musa ukuvumela uMtyholi akwenze ikhoboka.
UYesu ulindele lukhulu kuwe. Musa ukurhoxa.
Pedro - Xelisa uYohane
Pedro - Sukuzisonga iiArms zakho
UliLifa leNkosi yethu. Yomelela!
... xa ungawunaki umthandazo.
Akukho luloyiso ngaphandle koMnqamlezo.
Pedro - Intshutshiso Enkulu Phambili…
... kuya kufuneka wenze ukhetho ...
UPedro-Ubuntu bungcoliswe sisono
Funa amandla ngomthandazo nakwi-Ekaristi.
UPedro - uYesu, isonka esiphilayo
Nguye yedwa uloyiso lwakho.
Pedro-Ixesha lokudideka okukhulu
Phambili ukukhusela inyaniso!
UPedro-Amadoda aya kutshintsha iLizwi likaThixo
Mamela ukuze ungakhohliswa.
UPedro -Ayikho iNyanzelo kumaLungisa
Pedro - Musa ukuhlala kude noMthandazo
Kuyo yonke into, uThixo kuqala.
UPedro - kwizisombululo ezilula…
... enikezelwa ngabelusi bobuxoki.
UPedro - Bambalwa Ngesibindi SikaYohane uMbhaptizi
Uya kwikamva elinamaJaji amaninzi ...
Ubuntu buya kulawulwa ...
IBhabheli iya kusasazeka kuyo yonke indawo.
... ngqina ukuba ungokaNkosi.
Pedro - Uya Kutshutshiswa
Thembela ngokupheleleyo kumandla kaThixo.
Pedro -Icawa kufuneka igade ubukho bokwenyani
Uninzi luya kuyishiya inyaniso.
UPedro-Ungcolisa uMphefumlo kunye nendalo
UYesu nguManzi aPhilayo.
UPedro-Abasebenzi bakaMalusi baya kwaphulwa
IBhabheli ekhuthazwe ngabefundisi bobuxoki iya kubangela iyantlukwano.
UPedro-Ubumnyama obukhulu buyafika
Uphila ixesha elibi ngaphezu koMkhukula.
UPedro - uYesu uyindlela
Sukufuna iindlela ezimfutshane.
UPedro-Yintoni ebubuxoki iya kuwa
Inqanawa enkulu iza kuhamba eludakeni.
... behamba kwiindlela zokuzibhubhisa ezilungiselelwe ngezandla zabo.
Pedro - Ubalulekile
Amadoda nabafazi bokholo baya kukhuselwa.
Pedro -Ngqina: UngowaseNkosini
Eli lixesha elifanelekileyo lokuvakalisa iVangeli.
Pedro - Sukuya kude noMthandazo
Akuyi kubakho boyiso kumalungisa.
Pedro - Biza ukuguquka kwenene
Vula iintliziyo zenu ... nibe nesibindi!
UPedro - Bambalwa Abaya Kuhlala Elukholweni!
Nokuba kwenzeka ntoni, hlala noYesu.
Pedro - Yamkela iVangeli yakhe
Ngqina ngemimangaliso kaThixo ngobomi bakho.
UPedro - UYesu Ufuna Isibindi!
Kodwa uya kuphoswa ngaphandle ngenxa yokukhusela inyaniso.
UPedro - UYesu Woyisa Ukufa
Sukuvumela iingcinga zobuxoki zikuhlambele.
UPedro - Yithi "Ewe" kwifowuni yakhe
Uloyiso lukaYesu wam luloyiso lwakho.
Bathande kwaye ubathandazele ababingeleli.
Pedro - Thembeka kwiMagisterium eyiyo
Ndize kukukhokelela kuNyana wam uYesu.
Pedro-Uya kusela iNdebe yeNtlungu
UYesu uya kuba nawe. Yomelela!
Pedro - Funa izulu
Le yinjongo yakho.
Pedro - Ndiphulaphule
Ubuntu bujongise enzonzobileni enkulu.
Pedro -Ubalulekile kuloyiso
Ukuthula kwamalungisa kuyazomeleza iintshaba zikaThixo.
Pedro - Khetha iSango elimxinwa
Bambalwa abaya kuhlala beqinile.
Pedro-Ixesha leMfazwe eNkulu
Ungavumeli nantoni na ikuthintele ekulandeleni uYesu.
UPedro-Eli lixesha elilungileyo
... ukubuya kwakho.
UPedro - UYesu wam uhamba nawe
Uya kosula iinyembezi zakho.
Pedro -Ngqina kubukho bam
Ndivela ezulwini ndizokunceda.
I-Pedro-Inyaniso yesiqingatha iya kusasazeka
Musa ukukhukhulwa ludaka lweemfundiso zobuxoki.
UPedro - Xa Konke Kubonakala Kulahlekile
... uloyiso olukhulu lukaThixo luza kuza kuwe.
Pedro - Xa ubuthathaka
Pedro -Fumanisa ukuthanda kwakhe ngobomi bakho
Pedro - Ngabo Bathandazayo…
... uya kuba nakho ukuthwala ubunzima bomnqamlezo.
UPedro-Inyaniso iya kudelwa
Sukuvumela umhlaba ungcolise.
... kodwa iNkosi iya kuba ecaleni kwakho.
Pedro - Isiqhwithi esikhulu
Ukwaphuka kwenqanawa enkulu kuya kuchaphazela abo bakude nokholo.
Pedro -Lixesha lokubuya kwakho eli
Usinge kwikamva eligcwele imiqobo.
Pedro - Gobela amadolo akho ngomthandazo
Kuphela kungamandla omthandazo onokuthi uthwale ubunzima bezilingo ezizayo.
Emva koMnqamlezo kuya kuza uloyiso.
Pedro - Jikela ujikeleze, uthandaze
Ngaphandle komthandazo, uya kubhadula.
UPedro - Uloyiso luya kuza
... ngabo bazinikele kum.
Pedro-Yenza uVavanyo oluNzulu lweSazela
Uxolelo lukukhokelela kwinkululeko.
Pedro-Yamkela iimfundiso zeMagisterium eyiyo
Abo bangakwenziyo baya kutsalwa bangene enzonzobileni yeemfundiso zobuxoki.
UPedro-Owona nqanawa mkhulu uya kuphambuka kwizibuko elikhuselekileyo
Uloyiso luza kubakho kubuxoki.
UPedro - Uyathandwa, Omnye Nguye
Pedro-Susa yonke imiqobo
Funa amandla emthandazweni.
UPedro - Emva kwayo yonke intlungu
Kuya kubakho uvuyo olukhulu.
Pedro - Ukhululekile
Sukuvumela umtyholi akukhonze.
... kwaye simthande kwabanye.
Funa Inceba KaYesu Wam Kuvuma.
Uya kukhangela ukutya okuxabisekileyo kwaye ungakufumani.
UPedro - Mamela uYesu
Hlala kwindlela yenyaniso.
Pedro - Nika ingqalelo
... ukuze ungakhohliswa.
UPedro - Xa Konke Kubonakala Kulahlekile, uloyiso luya kuza
Ungalibali: ezandleni zakho iRosari eNgcwele kunye nesiBhalo esingcwele.
UPedro-Amadoda aya kuyishiya imithetho kaThixo
... kwaye nibe ngamakhoboka oMyalelo oMtsha.
UPedro - Udaka lweeMfundiso zobuxoki
Uninzi olukhethelwe ukukhusela luya kulahlekiswa.
Olo daka lweemfundiso zobuxoki luya kusasazeka kuyo yonke indawo.
Pedro - Xa iindonga ziwa
Iintshaba ziya kuhamba phambili kwaye zibangele umonakalo omkhulu endlwini kaThixo.
Isixhobo sakho sokuzikhusela kukuthanda inyaniso.
UPedro -Ikamva lodideko kunye nokwahlukana
Kukuthandaza kuphela onokubuthwala ubunzima.
UPedro Regis-IBhabheli eNkulu iya kusasazeka kuyo yonke indawo
Isixhobo sakho sokuzikhusela sikwiVangeli nakwimagisterium eyiyo.
I-Pedro - Inqanawa enkulu, Ukwaphuka okukhulu kwenqanawa
Lo ngunobangela wokubandezeleka.
Pedro - Sukubuyela umva
Sukuvumela usathana ukuba abe uxolo lwakho.
UPedro -Unegalelo kuThotho
Funa uYesu ngomthandazo nakwi-Ekaristi.
UPedro - Nantoni na eyenzekayo
Hlalani niqinile elukholweni.
UPedro -Candelo eliKhulu kwiNdlu kaThixo
KuThixo akukho nyani.
Pedro Regis-Musa ukuvumela ubumnyama bukaMtyholi ukuba bukukhokele
Nokuba kwenzeka ntoni, hlala neMagisterium eyiyo yeCawe kaYesu Wam.
Pedro-Musa ukuvumela ubumnyama bukaMtyholi
Ubuntu buyagula kwaye kufuneka buphiliswe.
Pedro Regis -Xelela wonke umntu ukuba uThixo uyangxama
Musa ukuyishiya ingomso into ekufuneka niyenzile.
Pedro Regis - Buya ngokukhawuleza!
Musa ukuhlala kude neNkosi.
UPedro Regis-Ingxaki enkulu yokholo
Uya kwikamva lendelelo enkulu kwiiNgcwele.
Pedro Regis -Emva kweembandezelo, iCawe iya kuba yimpumelelo
Ubuntu bungcoliswe sisono kwaye kufuneka buphiliswe.
Pedro Regis-Uloyiko lwakho kukungenelela kuMchasi wam
Akukho mntu unokwenza nantoni na ngokuchasene nawe ukuba ubeka ithemba lakho kuYehova.
I-Pedro Regis-Isicwangciso seentshaba zikaThixo kukuTshabalalisa iNgcwele
Gobisa amadolo akho emthandazweni kwaye uya kuba nakho ukuthwala ubunzima bezilingo ezizayo.
UPedro Regis - Ngokunyaniseka kwaye unesibindi "Ewe"
I-Pedro Regis-Amadoda aya kuyitshintsha iMithetho
Ukukhanya kwenyaniso akunakuze kucinywe kwabathembekileyo.
UPedro Regis-Musa Ukoyika Ubunzima bovavanyo
Isixhobo sakho sokuzikhusela ngumthandazo onyanisekileyo.
Pedro Regis -Zibonelele ngokona kulungileyo kwi-Mission
Yiba negalelo kuQinisekiso oluQinisekayo lweNtliziyo yam engaqhelekanga
Pedro Regis -Ngqina ngeMimangaliso yeNkosi
Kuyo yonke into, uThixo kuqala. Isibindi.
UPedro Regis-Abangcatshi bokholo baya kumanyana
Abakhuseli beMagisterium eyinyani baya kuphoselwa ngaphandle.
I-Pedro Regis-Ubuntu buyagula kwaye bufuna ukuphiliswa
Ndinike izandla zakho kwaye ndiya kukukhokelela kwimpumelelo.
Pedro Regis -Zomeleza kwiVangeli
Kuya kubakho intshutshiso enkulu kwabo bayithandayo nabayikhuselayo inyaniso.
Pedro Regis - Thandaza kakhulu ngaphambi koMnqamlezo
Umnqamlezo uya kuba nzima kubo bokholo.
UPedro Regis-Iminyaka emide yezilingo ezinzima
Gcwala ithemba. Ikamva liya kuba ngcono lilungisa.
Pedro Regis-Bhengeza uYesu naphina
Iintshaba ziya kwanda ngokumanyeneyo ukuze zikushiyele enyanisweni.
Pedro Regis-Inyaniso iya kufumaneka kwiindawo ezimbalwa
Nokuba kwenzeka ntoni, uhlale uthembekile kuMagisterium oyinyani weBandla likaYesu wam.
I-Pedro Regis-Uzuko lweli Hlabathi liphela
Funa oko kuvela kuThixo.
Pedro Regis-Abo bazinikele kum baya kukhuselwa
Ndidinga inyani yakho kunye "nesibindi" sakho.
UPedro Regis - Musa Ukusuka Emthandazweni
Xa ungekho, uba ngowona mgibe uphenjelelwa nguMtyholi.
I-Pedro Regis-Uninzi luya kungcoliswa ziimfundiso zobuxoki
Umtyholi uya kwenza ukuba akuthintele enyanisweni.
Pedro Regis-Kuya kubakho intshutshiso enkulu
Gcwala ithemba. Nabani na oseNkosini, akasayi kubufumana ubunzima.
Pedro Regis - Umsi kaMtyholi
Ubuntu buhamba ngeendlela zentshabalalo.
Pedro Regis - Amazulu amatsha, uMhlaba oMtsha
Emva kwazo zonke iintlungu, iNkosi iya kuzisula iinyembezi zakho.
Pedro Regis - UYesu Akayi Kukushiya
Xelisa uYohane umBhaptizi kwaye ukhusele into kaThixo.
I-Pedro Regis-Imbi kakhulu kunoNogumbe
Sukuyishiya ngomso into onokuyenza namhlanje.
Pedro Regis - IBhabheli eNkulu
Khathalela impilo yakho yokomoya.
UPedro Regis -Khusela uMthendeleko
Iingcuka ziya kusasaza ukudideka okukhulu ngokomoya.
UPedro Regis -Isiqingatha seenyaniso kunye nokuxoka
Zingisa kuloyiso olukhulu.
Pedro Regis - Ukudideka okukhulu
Pedro Regis - Phambili Ukhusela iNyaniso
Ubumnyama obukhulu buya kuwa kwiCawa.
Pedro Regis -Hlala kwiNdlela
Iintsuku ziya kuza xa uninzi luya kukhanyela ukholo ngenxa yokoyika.
Pedro Regis-Ixesha lifikile
Ndenza imvula engathethekiyo yemvula iwa phezu kwakho uvela ezulwini.
Pedro Regis -Khusela ubuGugu obukhulu
Iintshaba ziya kuthatha isenzo sokucima ukukhanya kwe-Ekrisarist.
Pedro Regis - Abaninzi baya kuphulukana nokholo
Uninzi luya kwenza isivumelwano kunye notshaba.
Pedro Regis - Intshutshiso Enkulu Iza
Kholosa ngaye kwaye uza kuphumelela.
Ungavumeli uMtyholi ukuba akhohlise kwaye akugcine kwinyaniso.
UPedro Regis-Baninzi abaya kukhohliswa
Ubuntu buhamba ngokomoya.
UPedro Regis-Idabi eliKhulu liza
Icawe iyatshutshiswa ngokuqatha.
Pedro Regis - Uthando kunye nokukhusela iNyaniso
UPedro Regis - Musa ukuRhoxa
Disorder uzoba khona yonke indawo ...
Pedro Regis-Isiqhwithi esikhulu siza
Hlala uthembekile ... awuyi kutsalwa ngumngxuma weemfundiso zobuxoki.
Pedro Regis - Thandaza, Thandaza, Thandaza
Ubuntu bujongise enzonzobileni yokuzibhubhisa abantu abayilungisileyo ngezandla zabo.
Luz de Maria - Iingcuka zilambile
Umchasi-Kristu uya kunqulwa njengoMesiya.
Pedro Regis - Into Emangazayo Iza
Uninzi lwabo luya kugungqiswa lukholo lwabo.
Pedro Regis -Iintshaba zibonakala zilungile
NguYesu kuphela kwendlela yakho.
UPedro Regis -Ukuqhekeka kwenqanawa yokholo
Abo bahlala bethembekile kude kube sekupheleni baya kubhengezwa besikelelekile kuBawo.
Pedro Regis - Ngomthandazo nakwiPurigator
Gcina kude kuyo yonke into ekugcina kuYesu.
UPedro Regis-Isiqhwithi esikhulu siya kuza
Ulungiselela ikamva lembandezelo enkulu.
UPedro Regis - iRosari kunye nesiBhalo esingcwele
Ndinike izandla zakho kwaye ndiya kukukhokelela kuYesu.
Pedro Regis-Gcina Ukholo Lwakho Lulungile
Vumelani ukukhokelwa kukukhanya kweNkosi.
Pedro Regis - Thembela kuMandla kaThixo
Uloyiso lwakho luya kuza ngamandla omthandazo.
Pedro Regis -Phambili ekukhuseleni iNyaniso
Iintshaba ziya kulahla iinyani ezinkulu zokholo.
Pedro Regis - Thanda kwaye ukhusele iNyaniso
Fuduka lihlabathi ukuze lingabi likhoboka likaMtyholi.
Pedro Regis - Thembela kuYesu
UngokuKhanya okukhanyisela ubomi bakho ...
UPedro Regis-Esona Sipho sikhulu
Olona hlaselo lukhulu luya kuza malunga nobuBingeleli kunye ne-Ekaristi.
Pedro Regis - Gcina iLangatye lokholo liphila
Gcina idangatye lokholo liphila ... Nokuba kwenzeka ntoni, uhlale noYesu.
Pedro Regis -Khuthazanani
Khuthazanani kwaye ninike ubungqina boBukho baMi phakathi kwenu.
Pedro Regis - Mamela kum
Mamela kwimamela kum. Ndingumama wakho kwaye ndivela eZulwini ukuze ndikukhokele ezulwini.
I-Pedro Regis-Nika ingqalelo
Andifuni ukukunyanzela, kodwa mamela.
Pedro Regis - Ubumnyama buGubungela uMhlaba wonke
Bantwana abathandekayo, niphila kwixesha lokudideka ngokomoya.
UPedro Regis kwiNdawo yoXolo
Ndifuna ukunenza babe ngcwele ukuze nizukise uBukumkani bukaThixo. Vula iintliziyo zakho! Kungekudala ...
Pedro Regis-Umhlaba uya kugungqana
UYesu ku: Ubuntu bujonge kwikamva elusizi. Umhlaba uya kunyikima kwaye uvela enzonzobileni uya kubonakala. Bantwana bam abahluphekayo ...
UPedro Regis - Ukuphazamiseka eCaweni
INkosikazi yethu yoKumkanikazi yoXolo ukuba, nge-1 kaJanuwari ka-2020: Bantwana abathandekayo, ndiyindlovukazi yoXolo kwaye ndin ...
exhonyiweyo imiyalezo, Kutheni le nto imboni?.
← Kutheni Simona noAngela?
Kutheni ababoni bethu… →
Luz-Ufuna ukutya kwe-Ekaristi Ngamana 14, 2022
Ubizo Olunamandla Lwenguquko Ngamana 13, 2022
UGisella - Thandazela iJapan kunye neTshayina. . . Ngamana 11, 2022